How'd it happen and more reports?: ကမ္ဘာ့ 4th အကြီးဆုံးစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူ - Xiaomi က Lei June!
ကမ္ဘာ့ 4th အကြီးဆုံးစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူ - Xiaomi က Lei June!
ဒီဇင်ဘာလ 1969 ၏ 16 ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီး; Xiaomi က Inc က - လဲ့ဇွန်လကမ္ဘာ့ 4th အကြီးဆုံးစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူများ၏အပြောင်လူသိများတည်ထောင်သူဖြစ်ပါတယ်
လောလောဆယ် $ 13.3 ဘီလီယံခန့်မှန်းခြေအသားတင်ရကျိုးနပ်နှင့်အတူလဲ့စီအီးအိုနှင့်အဆိုပါ $ 45 ဘီလီယံအဘိုးပြတ်ကုမ္ပဏီနှင့်အတော်ကြာပြောင်းလဲနေတဲ့ကမ္ဘာကြီးနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုမောင်းနှင်ကုမ္ပဏီများမှအောင်ပြီးနောက်, လဲ့မကြာခဏ၏ 'စတိဗ်ဂျော့ဘ်' 'အဖြစ်ရည်ညွှန်း၏ Chairman အဖြစ်ပြုမူ တရုတ်အဖြစ်ကောင်းစွာ။
Xiaomi ကတကမ္ဘာလုံးကို Samsung နှင့် Apple နှင့်အတူတန်းတူမှာနေသောゞင်း၏အဆင့်မြင့်ပါဝါဖုန်းများကြောင့်လူထုအကြားအကြီးအကျယ်ကျော်ကြားဖြစ်လာဖို့အပေါ်သွားပြီဖြစ်သော 2010 ခုနှစ်လင်းဘင် (ထွဂူဂယ်) နှင့်အတူလဲ့နေဖြင့် cofounded ဖြစ်သော်လည်း, တကယ်ဈေးပေါမှာရရှိနိုင်ပါသည်ခဲ့သည် ဈေးနှုန်းများ။
ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ, လဲ့အတွက်အထူးပြုဝိဇ္ဇာတစ်ဘွဲ့လည်းသူသည်ဤဒီဂရီရရှိခဲ့ပြီးရာကနေ, ဝူဟန်တက္ကသိုလ်ဘုတ်အဖွဲ့ပေါ်မှာထိုင်။ သူ့မိသားစုအကြောင်းပြောနေတာသူ Zhang က Tong မှလက်ထပ်သည်နှင့်ကလေးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။
လဲ့ဇွန် Xiaomi က၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကတည်းကပဲသုံးနှစ်ကြာတဲ့အမှု၌သောသူ, တရုတ်အကြီးဆုံး 4th စမတ်ဖုန်းအမှတ်တံဆိပ်မှဘာမျှမကနေကြီးထွားဖို့ပေါ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ သူကလူကြိုက်အများဆုံး Android မှာ Custom ROM တွေကိုကမ္ဘာတစ်ဝန်း၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်အတူအောင်မြင်စွာဆော့ဖ်ဝဲဈေးကွက်လွှမ်းမိုးဖို့လည်းစီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်။
သိသာတဲ့အတွက်ခြစ်ရာကနေစာသားထသောသူသည်ကား, သူသည်မိမိအစောပိုင်းကာလများတွင်မြင်ကြပြီအံ့သောငှါရုန်းကန်မှုများ၏တစ်ဖွဲ့လုံးစာအုပ်ရှိလိမ့်မယ်။ သို့သော်အလွန်ကြီးစွာသောဂုဏ်အသရေဖြစ်သောသူဖြစ်ခြင်း, လဲ့မဟုတ်ဘဲသူသည်ယနေ့နူန်းကျော်ကျော်ဘာကမ္ဘာကြီးကိုပြသနိုင်ဖို့ likes, သူ့ရုန်းကန်မှုများအကြောင်းကိုမပြောတတ်ပါဘူးသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
လဲ့ Xiantao တရုတ်နိုင်ငံဟူဘေးတှငျမှေးဖှားခဲ့သညျ။ သူ့ရဲ့ကလေးဘဝရက်ပေါင်းတရုတ်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းအတွက်ကြမ်းတမ်းစက်မှုမြို့အနီးရှိလွန်ခဲ့ကြသည်ဝူဟန်ကိုခေါ်နောက်ပိုင်းတွင်လည်းအဖြစ်ကောင်းစွာ 1991 ခုနှစ်ဝူဟန်တက္ကသိုလ်ကနေကွန်ပျူတာသိပ္ပံ၌သူ၏ BA ဘွဲ့ဖြည့်စွက်ရန်သွားလေ၏။
တက္ကသိုလ်မှာမိမိအချိန်အတောအတွင်းသူမစ္စတာစတိဗ်ဂျော့ဘ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်ဖတ်ခြင်းနှင့်သူ့ကိုတူသောတချို့နေ့ကဖြစ်လာမှဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ သူဟာအလွန်အမင်းစာအုပ်အားဖြင့် mesmerized နှင့်ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထူထောင်ချင်ခဲ့တယ်ခဲ့သည်။ ဒါကွောငျ့ဒီအိပ်မက်အောင်မြင်ရန်သူကောလိပ်ကျောင်းအစာရှောင်ခြင်းမှတဆင့်ရရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
မိမိအလေ့လာမှုများပြီးစီးပြီးနောက်လဲ့ Microsoft ကအလားတူသတိပြုမိနေကြသည်မဟုတ်သောသူအပေါင်းတို့သည် 1992 ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးအင်ဂျင်နီယာချုပ်အဖြစ် Kingsoft, (ထို့နောက်တစ်ဦးက start-up,) တရုတ်ဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်စတင်ခဲ့ပြီး; Kingsoft (ရုံက MS Word လို) စကားလုံးအပြောင်းအလဲနဲ့, antivirus ဆော့ဖ်ဝဲ, ဂိမ်းဖြန့်ဖြူးခြင်း, ပင်အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးမယ့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
မိမိအသက်သက်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အခွက်တဆယ်နှင့်အတူ, အချိန်မတစ်ဦးအမှု၌မှာ, လူအလျင်အမြန်လှေကားထမှစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် Now ကို 1998 ခုနှစ်တွင်ကုမ္ပဏီ၏ဥက္ကဋ္ဌဌနှင့်စီအီးအိုဖြစ်လာခဲ့သူကမှာခဲ့စဉ်ကသူလည်း Joyo.com တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည် အပြင် 2000 ခုနှစ်အွန်လိုင်းမှစာအုပ်ဆိုင်။ သူ၏အခွက်တဆယ်4နှစ်ပဲတစ်ဦးအမှု၌သူက 2004 ခုနှစ်တွင် Amazon.com $ 75 သန်းဖြင့်ဝယ်ယူခဲ့သည်သူ၏စာအုပ်ဆိုင်ဤမျှလောက်ကြီးစွာသောကြီးပြင်း, ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ခဲ့သည်။
ဤအချိန်ကာလအတွင်း 2000 ရဲ့အစောပိုင်းလောက်မှာ, ကောင်းကင်တမန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအဖြစ်သူလည်း YY, UC နှင့် Vancl များကဲ့သို့အများအပြားအောင်မြင်သော start-up ကုမ္ပဏီများ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်နှင့်အဖြစ်ကောင်းစွာသည်သူ၏အစုစုကုမ္ပဏီများအတွက် 70 ကျော်ရန်ပုံငွေကျည်စုစုပေါင်းကြီးကြပ်ဖို့သွားလေ၏။
ဆော့ဖျဝဲထုတျလုပျသူမြားနှငျ့ 16 နှဈကွာအပွီးသုံးနှဈအကွာတှငျသမြှသောနောကျကှယျမှထှကျခှာနှငျ့အောငျမွငျစှာ 2007 ခုနှဈတှငျゞင်းငျးတို့၏ IPO ပွီးပါကပွီးနောကျ, လဲ့ "ကနြွးမာအကွောငျးရငျးမြား" ၏အကောငျ့ပျေါ Kingsoft ၏ဥက်ကဋ်ဌနှငျ့စီအီးအို၏အနအေထားကနနေုတျထှကျမှာဒုဥက်ကဋ်ဌဖွဈလာခဲ့သညျ
Kingsoft ။ အရှင်နေ့က-to-နေ့ကလုပ်ငန်းဆောင်တာများထဲကရွေ့လျား!
သို့သော်မကြာမီပြုလုပ်သူ Vancl.com နှင့် UCWeb တစ်ခု (X) ပမာဏကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်သောနောက်, ရာမှနောက်ဆက်တွဲ, သူလည်းအဖြစ်ကောင်းစွာ UCWeb ၏ဥက္ကဋ္ဌဌဖြစ်လာခဲ့သည်။ UCWeb ယခုသန်း 500 ကျော်သည်အသုံးပြုသူများရှိပြီးမကြာသေးမီကအလီဘာဘာကဝယ်ယူထားပြီးတဲ့ browser တခုဖြစ်တယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးတော့နှစ်နှစ်ပြီးနောက်, အစာရှောင်ခြင်းကြီးထွားလာမိုဘိုင်းအာကာသသို့ရတဲ့သူ့အိပ်မက်ဖြည့်ဆည်းဖို့ကြိုးပမ်းထဲမှာလဲ့ 2010 ခုနှစ် Xiaomi က Inc မှတည်ထောင်ခဲ့သည်။
ယခု 2010 ခုနှစ်ဝန်းကျင်များနှင့်တစ်ဦးအနေဖြင့်ကတည်းကလဲ့သူ့ကိုအစာရှောင်ခြင်း-မြင့်တက်မိုဘိုင်းဖုန်းလောကသို့လိုချင်သော entry ကိုရနိုင်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်နိုင်ရန်မျှော်လင့်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်သူကအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လိုအပ်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့။ သူကမကြာခဏသင်သိလူတို့နှင့်အတူမိတ်ဖက်ဖို့ပြောပေမယ့်တစ်ဦးမဟုတ်ရင်ယုံကြည်ချက်နှင့်အတူသူသည်အကောင်းဆုံးလူတို့နှင့်အတူမိတ်ဖက်ဖို့ကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်။ အကူအညီတောင်း Bin ကိုလင်း - ထို့ကြောင့်သူသည်ထွ-ဂူဂယ်လှည့်။ Lin ကတစ်ဦးထံမှအပြုသဘောဆောင်သဘောတူညီချက်နှင့်အတူသူစိတ်ချလက်ချရှေ့ဆက်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
အဆိုပါ Start ကိုက The Rise ၄င်း, ကြီးထွားမှု ...
နောက်တစ်နေ့ခြေလှမ်းရန်ပုံငွေများဖြစ်ခဲ့သည်။ Morningside Ventures ကျောထောက်နောက်ခံကြောင့်ဟန်အဆုတ် Properties ကိုထိန်းချုပ်သောဟောင်ကောင်ဘီလျံနာချန်းနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကလဲ့အတွက်ပုံမှန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများခဲ့သညျ။ ထိုအခါယုံကြည်ခြင်းတရားကိုထိန်းသိမ်း, သူတို့ကလည်းနောက်တဖန်သူ့ကိုမ back ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်! အပြင် Chan ကနေလဲ့လည်းအကျိုးတူကုမ္ပဏီများ Qiming, Ceyuan, IDG Capital Partners, etc ကနေမြို့တော်လက်ခံရရှိ
ထို Xiaomi ကအတူလျူ De, ဟောင်ကောင် Feng တို့, Zhou Guangping, Chuan ဝမ်လီ Wanqiang နှင့်ဟောင်ကောင်-Kat Wong အပါအဝင်ရှစ်ပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့်အတူတရားဝင်ဧပြီ 2010 ၏6ရက်နေ့တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
လာမယ့်သုံးလမှာတော့ရန်လိုအလုပ်ကြိုးစားတဲ့ပြီးနောက် Xiaomi ကလည်း '' MIUI '' ဟုချေါသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးက Android-based firmware ကိုစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ပိုပြီးကရိုးရှင်းဖို့, တစ်ဦး firmware ကိုအဆိုပါ application များနှင့် operating system ကိုနှင့်အတူထပ်တူပြုခြင်းအတွက်ဆဲလ်ဖုန်းများ၏စစ်ဆင်ရေးကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဆော့ဖျဝဲပေမယ့်အချည်းနှီးဖြစ်၏။ ဤသည်ကို Samsung ဖုန်းများပေါ်တွင် '' TouchWiz '' ဆင်တူခဲ့သည်။
'' Xiaomi က Mi1 '- မကြာခင်မှာပဲသောနောက်, တစ်နှစ်ကြာပြီးနောက် 2011 ခုနှစ်သြဂုတ်လထဲမှာ, ကုမ္ပဏီလည်းသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးစမတ်ဖုန်းကြေညာခဲ့သည်။ ဤသည်စမတ်ဖုန်း MIUI firmware ကို အသုံးပြု. တင်ပို့မည်ဖြစ်သည်။ နှင့်အညီနောက်လာမည့်ဗားရှင်း Xiaomi က Mi2 စမတ်ဖုန်းဖြစ်ခဲ့သည်။ Mi2 Qualcomm ရဲ့ Snapdragon S4 Pro ကိုစွမ်းအားဖြင့်ခဲ့ပြီးလာမည့်နှစ်တွင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
အခုတော့ဒါဝေး, လဲ့ခန့်သာ $ 1 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိသည့်ကုမ္ပဏီများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်စိတ်ကိုအတွက်ကိန်းဂဏန်းရှိခြင်းဖူးသူ Xiaomi ကလည်း $ 10 ဘီလီယံဦးရေအများဆုံးတန်ဖိုးကိုကျင်းပထင်ခဲ့တယ်။ သို့သော်အမှားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤသည် Xiaomi ကအလွယ်တကူတစ်ဦး $ 100 ဘီလီယံကုမ္ပဏီဖြစ်လာဖို့အလားအလာခဲ့ကြောင်းပညာ, ရုရှားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ Yuri Milner တို့ကရှင်းလင်းခဲ့သည်။ အဖြစ်တာကဒီကသူ့ကိုရန်ထိတ်လန့်ခဲ့သကဲ့သို့, ဒါ့အပြင်သူ့ကိုသူကြီးမားသောအရာတစ်ခုခုပေါ်ခဲ့ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်စေတော်မူ၏။ ဒါကွောငျ့စိတျထဲတှငျဤအစောင့်ရှောက်သူအညီရှေ့ဆက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်!
ပထမဦးဆုံးဗားရှင်းရဲ့အပိုင်းကအရမ်းကိုကြီးမားအောင်မြင်မှုနှင့်အတူ Mi-2 စမတ်ဖုန်းတစ်ခု ပို. ပင်ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးတွင်ရောင်းချခဲ့ကြနှင့်ကြိုးမဲ့ဖုန်းရောင်းချသူ Mobicity ၏အကူအညီနှင့်အတူကုမ္ပဏီအပါအဝင်အနောက်တိုင်းဈေးကွက်ဖမ်းဆီးဖို့သွား - အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, ဥရောပ, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း သြစတြေးလျနှင့်နယူးဇီလန်။
ထိုနှစ်တွင်ပင်ဆိုလို 2013 ခုနှစ်တွင်ကုမ္ပဏီ၏အခြားကြီးမားသောအပြောင်းအရွေ့ကိုဖန်ဆင်းနှင့် Google များအတွက် Android အတွက်ပလက်ဖောင်းများအတွက်ထုတ်ကုန်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ဒုတိယသမ္မတငှားရမ်းထား - Hugo Barra ။ သူတို့ရဲ့သစ်ကိုဒုသမ္မတတရုတ်ပြည်မကြီးပြင်ပကုမ္ပဏီချဲ့ထွင်ရန်အဖြစ်သူတို့ကဘုတ်ပေါ်မှာသူ့ကိုရတယ်။ သူကပြည်မကြီးတရုတ်ပြင်ပဈေးကွက်အတွက်ကုမ္ပဏီအပေါငျးတို့သထုတ်ကုန်များနှင့်စစ်ဆင်ရေးစီမံခန့်ခွဲရန်အတွက်တာဝန်ခံ Xiaomi ၏ဂလိုဘယ်တိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
ယခုနှစ်တွင်လည်းအတော်လေးအနည်းငယ်သည်အခြားဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုကိုမြင်တော်မူ၏။ ဒါကသူတို့ရဲ့အသစ်သောစမတ်တီဗီများပစ်လွှတ်ပါဝင်သည်။ Mi3 ဖုန်းကို - ဤသူတို့ရဲ့အသစ်နှင့်လုပ် 3rd ဗားရှင်း၏ပစ်လွှတ်ခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်အဆိုပါကုမ္ပဏီလည်းဘေဂျင်းမှာသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအစဉ်အဆက်ဝန်ဆောင်မှုစင်တာမှကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ၌ပါသောကြေညာခဲ့သည်။
ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားနိဒါနျးနှင့်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုကြောင့်; ယခုနှစ်အကုန်တွင် Xiaomi ကတရုတ်အတွက်ပဉ္စမအများဆုံးအသုံးပြုသောစမတ်ဖုန်းအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ထိုကဲ့သို့သောလူငယ်တစ်ဦးကုမ္ပဏီဖြစ်ခြင်း, ကုမ္ပဏီသူတို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 30 ကျော်သန်း MIUI အသုံးပြုသူများအရှိခဲ့ပါတယ်ရှိရာအမှတ်သို့ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း, ထို့အပြင်သူတို့အဲဒီနှစ်ကိုယ်နှိုက်ကျော် 18,7 သန်းစမတ်ဖုန်းရောင်းချခဲ့လေသည်။
သူတို့ရဲ့လက်လှမ်းမမီခြင်းနှင့်ဝယ်လိုအားကုမ္ပဏီ4နှစ်ပဲတစ်ဦးအမှု၌ 2014 ခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်နှင့်ယခုနှစ် 2014 ခုနှစ်အားဖြင့် 26 သန်းကစမတ်ဖုန်းကျော်ရောင်းချခဲ့ရゞင်း၏တီထွင်မှုနှင့်အတူကုမ္ပဏီအတွက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဦးဆောင်စမတ်ဖုန်းရောင်းချသူဖြစ်လာမှ Samsung ကလွှဲပြောင်းယူခဲ့ကြောင်းထိုကဲ့သို့သောခဲ့သည် $ 9.9 ဘီလီယံကိုတစ်ဦးအသားတင်ရကျိုးနပ်နှင့်အတူ 2014 ခုနှစ်ဒုတိယသုံးလပတ်, လဲ့ယခုတရုတ်နိုင်ငံအတွက် 8th အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
နောက်ပိုင်းတွင် 2014 ခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ပတ်လည် Xiaomi ကလည်းအိန္ဒိယ၏ကျယ်ပြန့်ထိရသေးသောဈေးကွက်ဝင်ကြ၏။ Flipkart - သူသီးသန့်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံး E-commerce site ကိုအတူတက်ချည်ခြင်းဖြင့်ဈေးကွက်ဝင်ကြ၏။ အိန္ဒိယတွင်ゞင်းတို့၏သက်ရောက်မှုကိုသူတို့ပထမဦးဆုံး 24 စက္ကန့်ကိုယ်နှိုက်ရောင်းထွက်ခဲ့သည်, ထိုထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကစုစုပေါင်း 40,000 စမတ်ဖုန်းရောင်းချခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီအိန္ဒိယတွင်လျှင်မြန်စွာတိုးချဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့လည်းအဖြစ်ကောင်းစွာ Amazon.com နှင့် Snapdeal ကဲ့သို့အခြား E-commerce ခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူပူးပေါင်းလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အခါ, သောကွောငျ့ဖွဈသညျ။
ထိုအနှစ်ကုန်အတူရန်ပုံငွေ $ 1.1 ဘီလီယံကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်နှင့် Xiaomi ကထက်ပိုမို $ 46 ဘီလီယံအဘိုးပြတ်နှင့်အတူကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအရှိဆုံးနည်းပညာက start-up, ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဒါပေမယ့်ပင်ထိုကဲ့သို့သောအမြင့်ဆုံးအမှတ်သို့ရောက်ရှိပြီးနောက်, လဲ့တစ်ခု IPO ကိုဖွင့်ရန်အလွန်ချီတုံချတုံဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကဟုတ်ကဲ့၏သင်တန်း IPO ဟုတ်ပါတယ်လူတိုင်းကြွယ်ဝသောလိမ့်မည်, $ 100 ဘီလီယံပေးရန်ကုမ္ပဏီစကေးゞင်းတို့၏ရှယ်ယာများကိုရောင်းချရန်နှင့်ငွေတွေအများကြီးလုပ်လိုသည်ဟုယုံကြည်ပေမယ့်တစ်ဦး IPO ၏ပစ်လွှတ်နှင့်အတူ, တကကုမ္ပဏီစီမံခန့်ခွဲဖို့အညီအမျှခက်ခဲဖြစ်လာ သူကိုအလို? ထို့ကြောင့်သူသည်သူလုပ်နိုင်မတိုင်မီနောက်ထပ်5နှစ်အထိစောင့်ဆိုင်းချင်တယ်။
ကနေစဉ်အချိန်အတွင်းဒါပေမယ့်သူလည်းသူ့ kitty မှအခြားရည်မှန်းချက်ကဆက်ပြောသည်ခဲ့သည်။ သူဟာလာမယ့်ငါးဦးမှဆယ်နှစ်အတွင်းစမတ်ဖုန်းဈေးကွက်ထဲမှာကမ္ဘာကြီးကိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမှကုမ္ပဏီချုံ့ချဲ့ရည်ရွယ်။
အဆိုပါစီးပွားရေး, အခွန် နှင့်ဈေးကွက်မဟာဗျူဟာ ...
စမတ်ဖုန်းရောင်းချများတွင် Xiaomi ကသောဈေးကွက်အလားအလာနှင့်မတူဘဲတစ်မူထူးခြားတဲ့နည်းဗျူဟာကိုအသုံးပြုသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီကြောင့်လည်းအရည်အသွေးနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်စေဘဲနီးပါးကုန်ကျစရိတ်ဈေးနှုန်းမှာမိမိတို့၏ဖုန်းများများ၏ဈေးနှုန်းများကိုသတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။
နှင့်ဤကျဉ်းမြောင်းတဲ့အနားသတ်ကနေအမြတ်အစွန်းဖြစ်စေခြင်းငှါ, မပို6ထက်လကြာတဲ့မော်ဒယ်ရောင်းသောသူသည်ゞင်း၏ပြိုင်ဘက်မတူဘဲကုမ္ပဏီအထိ 18 လအဘို့မိမိတို့မော်ဒယ်ရောင်းချပါတယ်။ ထက်ကတခြား, သူတို့ရဲ့ဖုန်းကို-related ကိရိယာ, စမတ်နေအိမ် gadgetry, apps များ, အွန်လိုင်းဗီဒီယိုများ, themes များ, စသည်တို့လည်းသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေါ်ထည့်ပါ။
နောက်ထပ်သူတို့ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်, Xiaomi ကゞင်း၏ထုတ်ကုန်ရောင်းဖို့နှင့်ゞင်း၏ပြိုင်ဖက်နဲ့မတူပဲတစ်ခုတည်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်ပိုင်ဆိုင်မထားဘူးသီးသန့်အွန်လိုင်းအလတ်စားအသုံးပြုသည်။ အဘယ်အရာကိုပိုပြီးင်ကゞင်း၏ရှယ်ယာအပေါ်တစ်ဦးတင်းကျပ်သောထိန်းချုပ်မှုကိုစောင့်ရှောက်ရန်, Xiaomi ကထောက်ပံ့ရေးဝယ်လိုအားဖြတ်သန်းသွားသည်နှင့်တစ်ခုလုံးကိုအချိန်မြင့်မားတဲ့အပေါ်ဈေးကွက်ဘက်ဇ်ကိုစောင့်ဘယ်တော့မှသေချာစေသည်ထားတဲ့ကန့်သတ်ရရှိနိုင် flash ကိုအရောင်းကမ်းလှမ်း, သောကွောငျ့ဖွဈသညျ။
အခုတော့အခြားတစ်ဖက်တွင်, Xiaomi ကလည်းအဟောင်းရိုးရာဈေးကွက်ရှာဖွေရေးသို့မဟုတ်ကြော်ငြာနည်းစနစ်တွေနဲ့ဝေးပေးထားသောနှင့်ပါးစပ်ゞင်း၏ထုတ်ကုန် a.k.a. နှုတ်ကပတ်တော်ကို advertise ကူညီရန်ゞင်း၏ကိုယ်ပိုင်ဖောက်သည်များနှင့်အတူလူမှုရေးကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်အဓိကအားမှီခိုခဲ့သည်။
ထိုသူတို့၏အားသစ္စာစောင့်သိဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းတည်ဆောက်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်, Xiaomi ကသူတို့ရဲ့ဖောက်သည်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်မှနီးကပ်စွာနားထောင်ဖို့သေချာစေသည်။ လက်တွေ့တွင်ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်မန်နေဂျာအကြံပြုချက်များအဘို့စဈဆေးဖို့, ကုမ္ပဏီရဲ့ user ဖိုရမ်များအပေါ်အချိန်များစွာသောငွေပမာဏအတွက်ထားနှင့်တစ်ဦးအကြံပြုချက်တက်ခူးဖြစ်ပါတယ်တခါ, ကအလျင်အမြန်အင်ဂျင်နီယာများမှပြောင်းရွှေ့နေသည်။
အဆိုပါအင်္ဂ࿿ါရပ်များကိုထို့နောက်အလားအလာသူတို့ဖုန်းသစ်ကိုအသုတ်အတွက်အပတ်တိုင်းတင်ပို့နေသောပြီးနောက်တစ်ပါတ်တစ်ထွာအတွက်ရေကြောင်းထုတ်ကုန်မျှသာအယူအဆကနေလှည့်။ Xiaomi က "သင် Build အဖြစ်ဒီဇိုင်း" ဒီဖြစ်စဉ်ကိုခေါ်ဆို!
သငျသညျယဘေုယအြားကကြည့်ရင် Xiaomi ကပေါင်းစပ်နဲ့ Amazon ရဲ့မဟာဗျူဟာနှင့်အတူ Apple ကနည်းဗျူဟာကိုအသုံးပြု!
ဒါဟာနာမည်ကြီး Apple ကကို AT & amp နှင့်အတူသီးသန့်ゞင်းတို့၏ iPhone ကိုဖြန့်ချိခဲ့သည့်အခါ, ထိုလူသိများသည်; T ကသူတို့အမှန်တကယ်ဆင်းတင်နိုင်နှင့် Apple တို့ကချမှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းများအားဖြင့်သွားကြဖို့အပေါငျးတို့သသယ်ဆောင်အတင်းအဓမ္မခဲ့သည်။
အလားတူမဟာဗျူဟာများက Going, Xiaomi ကလည်းသူတို့ရဲ့စတော့ရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲသူတို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖောင်းပွ generate, သူတို့ရဲ့ဝယ်လိုအားတိုးမြှင့် flash ကိုအရောင်းအသုံးပြုသည်။ ရှင်းနေသည်မှာ, ဤကိုလည်း Xiaomi ကအဖြစ်ကောင်းစွာရိုက်ချက်များကိုပဌနာစလေိုကွောငျးဖျောပွသညျ။
အခုတော့အခြားတစ်ဖက်တွင်, အမေဇုံကျွန်တော်တို့အများစုကသိသည်အတိုင်းသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုချဲ့ထွင်ရန်ゞင်း၏အကျိုးအမြတ်အများဆုံးအသုံးပြုသည်။ အလားတူပင် Xiaomi ကများလွန်းသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေပိုက်ဆံအများစုပေမယ့်ကျယ်ပြန့်တိုးချဲ့တစ်ဦးရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူသော့ချက်ဒေသများရှိ software ကိုကုမ္ပဏီများမှအတွက်ရရှိသည်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ။ အခြေခံအားဖြင့်အမေဇုံအဆက်မပြတ်အကြီးအကျယ်ကြီးထွားသို့ခြီးမှမျးရာゞင်း၏ကိုယ်ပိုင်ဈေးကွက်သို့ reinvests ။ Xiaomi ကအတန်ငယ်အတူတူပါပဲ။
သူတို့ရဲ့လက်ရှိ နှင့် အနာဂတ࿿ ...
5 နှစ်ပဲတစ်ဦးအမှု၌ゞင်း၏ပစ်လွှတ်ကတည်းက Xiaomi ကယခုကိုလည်းဒီဇိုင်းဖွံ့ဖြိုးနှင့်စမတ်ဖုန်း, မိုဘိုင်း app များနှင့်ဆက်စပ်စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်ရောင်းချရသောကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး 4th စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူဖြစ်လာမှပေါ်လာခဲ့သည်။
သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များ၏တချို့ကသည် Mi စီးရီး, Redmi စီးရီး, MIUI (operating system), MiWiFi (ကွန်ယက်ကို router ကို), MiTV (စမတ်တီဗီလိုင်း), MiBox (set-top box ကို), MiCloud (cloud storage service ကို), MiTalk (messaging service ပါဝင်သည် ), MiPower ဘဏ် (ပြင်ပဘက်ထရီ), Mi Band (ကြံ့ခိုင်ရေးမော်နီတာ & amp; အိပ်ပျော်ခြင်း tracker), နှင့်အခြားသောစမတ်နေအိမ်ထုတ်ကုန်များ။
$ 12 ဘီလီယံ (2014) တန်ဖိုးရှိထက်ပိုမို 8000 န်ထမ်းများနှင့်ဝင်ငွေနှင့်အတူ, Xiaomi ကအဓိကအားဖြင့်ပြည်မတရုတ်, မလေးရှား, စင်္က࿿ာပူထဲမှာရှိနေခြင်းရရှိထားသူများနှင့်လည်းမှထုတ်ပြန်သောအိန္ဒိယ, အင်ဒိုနီးရှား, ဖိလစ်ပိုင်နှင့်ဘရာဇီးကဲ့သို့သောအခြားနိုင်ငံများသို့တိုးချဲ့ခံရဖို့မြင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။
Xiaomi က "24 နာရီတစ်ခုတည်းအွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းရောင်းချအများဆုံးမိုဘိုင်းဖုန်းများ" များအတွက်ကမ္ဘာ့စံချိန်ကိုချိုးဖျက်ဖို့စီမံခန့်ခွဲထားပါတယ်သောကြောင့်, ထိရသေးသောအိန္ဒိယဈေးကွက်သို့ゞင်းတို့၏တိုးချဲ့လည်းတော်တော်လေးထူးခြားတဲ့နှင့်ရန်လိုဖြစ်လာသည်။
Xiaomi က Inc မှချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်အဆကြီးထွားကူညီသကဲ့သို့ယခုအချိန်အထိ Xiaomi က 100 ဦးကိုပိုမိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံအပေါ်တစ်ဦး 20 က start-up, ကုမ္ပဏီများနှင့်အစီအစဉ်များတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည်။ ထိုအထဲကတချို့ဟာပါဝင်သည်: - Jimubox (2015), Ninebot (2015), Lizhi (2015), 21viaNet (2014), iQiyi (2014), Xunlei (2014), Misfit စမတ်ဖုန်းတွေကိုဖက်ရှင်ပစ္စည်း (2014), စသည်တို့နှင့်အများအပြားကပို။
၄င်းတို့၏ရန်ပုံငွေကျည်အကြောင်းပြောနေတာနောက်ဆုံးအနေနဲ့, အကြမ်းအားဖြင့် $ 45 ဘီလီယံတဲ့အဘိုးပြတ်မှာ Xiaomi ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အလွန်ကိုယ်ပိုင် Ratan Tata, Morningside Group မှ, ပညာ, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ, IDG Capital Partners, Qualcomm မှ Ventures, Temasek Holdings နှင့်အနည်းငယ်အခြားသူတွေပါဝင်သည်ရာ 11 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအနေဖြင့်6round အတွက် $ 1,45 ဘီလီယံစုစုပေါင်းထမြောက်တော်မူခဲ့သည်။